Indlela yokutya yasimahla | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukutya mahala simahla
Arnau Aparisi | | Idizayini yeMifanekiso, Izibonelelo
Namhlanje siza nefayile ye- ukhetho lwee mockups okanye mockups yoyilo lwakho kule meko inxulumene ne ukondla. Kwabo kuni abangaqhelananga nekota yokuhlekisa, ubukhulu becala ziifayile zePSD ngothotho lohlengahlengiso olusivumela ukuba senze ngokukhawuleza nangokukhawulezileyo mockups kuyilo lwethu. Kule meko ndigqibe ekubeni ndenze ukhetho lwe mockups simahla, kulula ukukhuphela kunye umgangathoNgemfuno yangoku ephezulu ye-mockups, kunzima kakhulu ukuzifumana ngokukhawuleza nangokulula.
Eyokuqala esiza nayo ivela ku Ibhotile yewayini enqunyanyisiweyo, Oku kuhlekisa kumgangatho ophezulu kwaye kuvumela ukusetyenziswa kwayo simahla kuzo zombini izinto zobuqu kunye nezentengiso. Kule meko, ukugculelwa embuzweni kungasetyenziselwa ukwenza umsebenzi wentengiso ngenxa yomgangatho wayo kunye ne-aesthetic finesse.
Unga khuphela apha ngokunqakraza iqhosha lokukhuphela, kule meko akukho bhaliso lufunekayo, kwaye akufuneki nokuba sinike imeyile yethu ukuyikhuphela.
Okwesibini endikhethileyo iingqayi zejamLe mockup ilula, ke isebenza ngokugqibeleleyo ekunikezelweni koyilo kubaxumi, elinye lamacandelo amahle oku kuthathwa kukuba kubandakanya imvelaphi eyahlukeneyo yokufaka isicelo ekufumaneni kwethu, ke oko kusigcinela ixesha lokukhangela ukusebenza imvelaphi kwi-Intanethi.
Unga khuphela apha
Koku kuhlekisa kwesithathu ndikuzisa ubhiya, kule meko iza ngobungakanani be-7000 x 6000 px ke iyasivumela ukuba sandise iinkcukacha kwi-mockup uqobo, kule meko iza kumgangatho we-300 dpi kwaye ikwalungele ukushicilelwa.
Le mockup endikuzisele yona ivela iiglasi zekofuKule meko, ziyimifanekiso enomtsalane ekhumbuza amaphulo wentengiso enkosi ngokuhamba kunye nomgangatho wezi zinto zihlekisayo, nangona ipakethi igqibelele kungoko ukongeza kule mifanekiso ikwabandakanya ukhetho oluninzi ngaphakathi koqwalaselo olungakumbi ezisebenza ukunika umnqweno onzulu ngakumbi kwimveliso yokugqibela. Kwakhona, umgangatho kunye nenkcazo yezi mockups zivumela ukusetyenziswa kwazo kokubini kwezorhwebo kunye nokuzisebenzisa.
Kule meko kukudityaniswa kwe Iitshokholethi, iyahlelwa kwaye ikumgangatho, kule meko ezi mockups zimbini zahlukeneyo zibandakanyiwe, enye ineebhari zetshokholethi ezimileyo kwaye enye inazo "ezidadayo" oku kusivumela ukuba sihambise ngaphezulu kwesisongelo esinye sokubonisa imveliso, ke thina Inika ithuba lokuqinisa ngakumbi imveliso yemveliso.
Unga khuphela le mockup apha
Le enye endikuzisele yona kukuthambeka Izikhongozeli zejusiKule meko, iza nembono yenxalenye yelebheli kunye nembono yenxalenye yekepusi, ke oko kusinika ithuba lokubonisa iifomathi ezahlukeneyo zelebheli kunye nophawu ngokwalo. Kwakhona ndikhethe le mockup ngokulula kwayo, ngaphandle kwezinto eziziisekondari ezithintela imveliso ephambili.
Olu phuculo lomgangatho unakho khuphela apha
Kule meko le mockup isikhongozeli sobusi, le mockup isivumela ukuba senze ukulingisa ngokuprinta ngqo kwisitya sokugcina. Kule meko, ukusetyenziswa kwesibane kwimodemu kuye kwaqaphela kakhulu, nto leyo inika imveliso ukuba ibonakale inomtsalane.
Isiphelo sokugqibela endikuzisele sona sivela kwakhona iibhotile zewayini, kodwa kule meko iza nebhotile yewayini ebomvu, i-rosé wine kunye newayini emhlophe, ke kuya kufuneka sibonise izindululo ezahlukeneyo ngaphakathi kwewayini ebanzi yewayini, oku kusivumela ukuba sibonise ubunini beebhotile ezahlukeneyo. Kwakhona, imifanekiso ikumgangatho ophezulu kwaye ikwanobuzaza obukhulu obunemvelaphi ethe tyaba kunye nezinto ezimileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Ukutya mahala simahla
Eli gcisa lenza ii-tattoo ze-3D ze-realreal kunye nenkcazo
Igqabi elibunile njengelona lelaphu lilungileyo lomzekeliso